Hargeysa(Gebogebonews)- Xoghayaha Xisbiga ugu weyn mucaaridka dalka Jabuuti ee MRD, Mud Jaamac Xuseen Rooble ayaa ka hadlay arrimo ay kamid yihiin dekeda Jabuuti ee laga wareejiyay shirkadda laga leeyahay waddanka Dubia ee DP World. Mr. Jaamac Xuseen Rooble oo khadka telefoonka ugu waramay telefiishenka Bulsho Tv ugu horeyn waxa uu jawaab ka bixiyey xalaalnimada heshiiska dekedda Jabuuti iyo DP World, waxaanu yidhi;
“Arrinta DP World, kolay sidaad ka war haysaanba, kolkii qorshahan (heshiiskii Jabuuti iyo shirkadda DP world) la saxeexanay, wax baarlamaan la mariyey ma jirin, wax bulshada reer Jabuuti la ogeysiiyayna ma jirin. Laban nin oo kala ahaa Cabdiraxmaan Boorre iyo madaxweyne Geelle uun baa ogaa oo saxeexay, ee annagu ka mucaarid ahaan wax aanu wax ka ogeyn ma jirto, oo sharcigii dhamaa ee dalkaba lama ogaysiin. Sida immika la sheegayo ee aad aragtaan, markii laysdiiday ee labadaasi nin arrin siyaasaddeed isku diideen, uun la leeyahay waan khaldannay oo waliba khaladkii cid kale la saarayo, ninkii sameeyay uu leeyahay sidaas, Kuwa waxan sameeyay ayaa wali dalkii jooga oo xukumaya.
Waxa kaloo jirta inaanay ogeyn xataa lacagta lagu heshiiyay, iyadoo muddada heshiiskaasi la saxeexay yahay konton sano, baarlamaankana yaan lohor keenin baabay yidhaahdeen, boodhkii hore ee jabuutina hala baabiiyo ayay yidhaahdeen. Waxaas oo dhami waxay ahaayeen wax nimankasi samaysteen ee wax ummadda reer Jabuuti leedahay oo cashuur la qaadayo maba ahayn. Wax qarsoodi lagu saxeexday ayay ahayd, wixii ka dhashayna waydiinkaa arkaya. Ayuu yidhi Xoghayaha xisbiga mucaaridka ugu weyn ee dalkaasi Jaamac Xuseen Rooble oo khadka telefoonka ugu waramay telefiishenka Bulsho Tv
Mar xoghayaha la weydiiyey su’aal u dhignayd: Yaa Lagu Wareejiyay, Shirkad Noocee Ah, Muddo Intee Le’eg Ayay Haynaysaa Dekedda Jabuuti?, waxaa uu ku jawaabay “maamulka dekedda Jabuuti ee shirkadda DP World laga qaaday, sida lagu sheegay digreeto madaxweyne Geelle soo saaray waxa lagu wareejiyay hay’adda waddani ah oo dalku leeyahay oo dawladdu leedahay baan ku wareejiyay buu yidhi, muddo lix bilood ah. Taas oo aannu ognahay inay tahay hay’addii kamidka ahaa kuwa dalku leeyay.
Waxaan kaloonu ognahay in DP World ay dacwad dhigatay Maxkamadda London ku taalla, maxkamaddaas oo ah tii kala saaraysay heshiishka sida ku qoran, haddii wax laysku qabto lagu kala bixi lahaa, dee dacwadeeda wixii kasoo baxa waanu sugaynaa, hay’adda lagu wareejiyay waa hay’add dawli ah oo Jabuuti ah, inay bal ka wanaagsanaato shaqadii iyo inay wax ka dhacaan, waa loo wada joogi.
Waxa koloo jirta iyana dekedda Shiinuhu dhisay, oo iyaduna loo saxeexay wakhti dheer, haddii laysku qabsado, iyadana hadday wax ka yimaadaan, maxkamadda London uun baa la tegayaa. Dhammaan waxaas maalgalin ee lala saxeexday dawladda Shiinaha mida waddada tareenka oo iyadu Addis ababa laysla tegi doono, maahane inta kale taas London uun baa laysla tegayaa.
Waxa kale oo uu ka hadlay warar sheegaya in dawladda Jabuuti ay baasaboorrada kala laabanayso dadka reer Somaliland iyo kuwa Soomaalida kale ah ee qaatay baasaboorrada sadexda sano ee dalkaasi. Waxaana mar arrintaasi wax laga weydiiyey uu yidhi “Waan maqlay arrinkaasi baasaboorrada ee laga soo laabay ee waraaqaha loo diray safaaradahii adduunyada, oo la leeyahay ma soconayaan baasaboorradii aanu siinay dadka Soomaaliya iyo kuwa Somaliland labadaba. Kolkaas waxa masuul ka ah kolay sidaan qabo dawladda jabuuti iyo ragga madaxda ah ee ka tirsan, oo kolay kuwan la siiyay Soomaalidu waa dadkeenii, waxa jira kuwa kale oo badan oo la bixiyey, balse waxaannu ka ognahay ma jirto, waxase igu maqaalo ah, qolada Somaliland in waxa la siiyay baasabooro Dubia ah. Kolay annagu shaqo kuma lihin oo qolyooyinkaa socdaalka iyo laamaha dawladda ayaa ku shaqo leh arrintaasi.”